Al-shabaab oo sheegataya mas’uuliyada weerarkii Mandheera iyo Kenya oo ka hadashay – Radio Daljir
Al-shabaab oo sheegataya mas’uuliyada weerarkii Mandheera iyo Kenya oo ka hadashay
Diseembar 7, 2019 9:43 b 1
“Galabnimadii Jimcaha oo ay taariikhdu ahayd 09 Rabiicu thaani 1441 Hijri, kuna beegnayd 06/12/2019, Ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ayaa hawlgal ka fuliyay gobolka Wajeer ee ka tirsan Kenya. Hawlgalka oo dhacay saacaddu markii ay ahayd 17:00 galabnimo, waxaa lagu dilay 10 ruux Kenyanti ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan hay’adaha sirdoonka qarsoon iyo shaqaalaha dowlada” ayaa lagu yiri Warka kasoo baxay Al-shabaab.
Dhinaca kale dowladda Kenya ayaa ka hadashay weerarkaasi lagu qaaday Mandheera.
Waxa ay dowladda xaqiijisay in toban qof oo lagu dilay Bas marayay Duleedka Mandheera ay ka mid ahaayeen saraakiil Boolis ah.
7 ka mid ah tobanka qof ee ku dhintay weerarkaas ayey dowladda Kenya ku sheegtay in ay ahaayeen saraakiil Boolis ah oo dib ugu laabanayay shaqadooda.
Isgaarsiinta degmada Eyl oo go’an iyo roobka oo beerihii latagay (daawo)
Faah Faahin: Weerar lagu qaaday Xabsi ku yaala Gaalkacyo
ISIS made in ISRAELI